Dabley hubaysan oo dad badan ku xasuuqday Waqooyiga Itoobiya | Berberanews.com
Home WARARKA Dabley hubaysan oo dad badan ku xasuuqday Waqooyiga Itoobiya
Dabley hubaysan oo dad badan ku xasuuqday Waqooyiga Itoobiya
Itoobiya-(Berberanews)-Dabley hubeysan ayaa dishay daraasiin dad ah weerar “argagax leh” oo lala beegsaday bas ay saarnaayeen dad shacab ah galbeedka Itoobiya, sida laga soo xigtay hay’adda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi.
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya (EHRC) ayaa bayaan ay soo saartay Axadii ku sheegtay in “qiyaasta tirada dhimashada, oo hadda ah 34, ay u badan tahay inay ka korodho” weerarkii ka dhacay habeenimadii Sabtida aaga maamulka Benishangul-Gumuz.
Waxay sheegtay inay jiraan warbixino sheegaya “weeraro” la mid ah, iyo dad ka cararaya rabshadaha ka socda qaybaha kale ee gobolka, iyo sidoo kale “dadka u qaxay inay gabaad raadsadaan”.
Ma jiro wax war ah oo deg deg ah oo ku saabsan cidda falkaasi geysatay. Weerarka ayaa yimid iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo gobolka Tigree ee woqooyiga dalka oo sida la sheegay inay ku dhinteen boqolaal dad ah, kana carareen in ka badan 20,000 oo qof oo u qaxaya xadka Suudaan.
Ma jiro wax xidhiidh ah oo la ogyahay oo ka dhexeeya rabshadaha ka socda Benishangul-Gumuz iyo howlaha militariga ee ka socda Tigray.
Previous articleHoggaamiyaha Tigreegay oo qiray inay weerareen Eritrea
Next articleCiyaartii Hargeysa iyo Gabiley oo dirqi lagu kala baxay